Madaxweyne Farmaajo oo Jaamacadda Gaheyr ka sheegay go’aano farxad gelinaya ardayda (Daawo) – Balcad.com Teyteyleey
Madaxweyne Farmaajo oo Jaamacadda Gaheyr ka sheegay go’aano farxad gelinaya ardayda (Daawo)
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta booqday xarunta jaamacadda Gaheyr oo ay dhowaan ka guureen ciidamada AMISOM, halkaasi oo uu ka jeediyay khudbad ku saabsan mustaqbalka jaamacadaasi, qorshaha dowladdu ka damacsan tahay, faa’iidooyinka ay u leedahay waxbarashada iyo qodobo kale.
“Waan ku faraxsanahay in jaamacadaan ay wax ku bartaan arday 90% ka yimid gobolada dalka laguna qaato aqoontooda iyadoo aan loo eegin nidaamka 4.5 ee qabiilka ku dhisan” ayuu yiri Madaxweynaha oo sheegay in dowladdu sii xoojineyso waxbarashada si ay fursad u helaan dhallinyarada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ballanqaaday in dowladdu qoondo lacageed siineyso macallimiinta jaamacadda Gaheyr, isla markaana lagu sameynayo dib u dhis kaddibna si degdeg ah u howlgaleyso jaamacadda.
“Waa inaan Curculm-ka ku darno tix-raacna aan ka dhigano wixii aan soo marnay si dhallinyarada hadda joogta iyo kuwa ka dambeeya aysan dib ugu dhicin wixii aan soo marnay” ayuu mar kale yiri Madaxweynaha.
Dhinaca kale Madaxweynaha ayaa sheegay in ardayda Soomaaliyeed ay si lacag wax uga baranayaan jaamacadda Gaheyr ilaa toban kulliyadood, isagoona ballanqaaday in wax kasta oo tas-hiilaad ah ay dowladdu bixineyso.
The post Madaxweyne Farmaajo oo Jaamacadda Gaheyr ka sheegay go’aano farxad gelinaya ardayda (Daawo) appeared first on Ilwareed Online.
MAANA FAAY WAA SHEEKO QARAN, MANA MUDNA INAY BURCAD BILILIQEYSATO!